बिहीबार चैत्र २९ २०७४ लुअप
अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले पहिलोपटक मानव वीर्य अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आइएसएस) मा पठाएको छ । अन्तरिक्षमा मानव जन्म सम्भव छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन नासाले परीक्षण गर्न लागेको हो।
प्रजनन हुनका लागि वीर्यका कोषहरु सक्रिय हुनुपर्छ र विस्तारै पौडदैं अण्डातर्फ जानुपर्छ । मानव वीर्य पहिलोपटक पठाइएपछि साँढेको वीर्य भने यसअघि पनि पठाइएको थियो। यसपटक अघिल्ला परीक्षणसंग तुलना गर्न पुनः पठाइएको नासाले जनाएको छ । अध्ययन गरिसकेपछि वीर्यका सबै नमूना पृथ्वीमै पठाइनेछ। एजेन्सी
किन हुन्छ ढाड दुख्ने समस्या ?
यस्ता छन् ध्यान गर्नुका फाइदाहरू
सधैँ स्वास्थ्य रहनको लागी खानुपर्ने खानेकुराहरु
कतै तपाईंलाई सामाजिक सञ्जालको लत त लागेको छैन ?
पेट भरिएको समयमा पनी भोक लाग्छ जन्नुहोस कारणहरु